INacpan Beach Glamping, iOcean View Room - I-Airbnb
INacpan Beach Glamping, iOcean View Room
Intente sinombuki zindwendwe onguNacpan
I-Nacpan Glamping ibekwe kolunye lolona lwandle lukumgangatho ophezulu eAsia, 'Nacpan Beach', El Nido, Palawan. Isolula i-4.2km, olu nxweme lwesanti emhlophe lukhawuleza ukuba ludumo lweHlabathi kufuneka lubone indawo ekuya kuyo kwiiPhilippines.
I-Nacpan Glamping inikezela ngeyona ndlela ikhethekileyo, enye kunye namava okuhlala kwimo yobugcisa obuyi-6m ububanzi bentente yeemitha ukusuka elunxwemeni.
I-Nacpan Beach Glamping ineentente ezi-5 zangaphambili zoLwandle eziFumanekayo!
Iintente zethu zonke zifakelwe umgangatho ophezulu wangaphakathi kuquka ne-air-conditioning kunye neebhedi ezimbini zamawele ezikumgangatho weenkwenkwezi ezintlanu. Zonke iintente ezintathu zabelana ngegumbi lokuhlambela elidibeneyo kunye negumbi lokubonisa.
Iintente zimi kwimitha ukusuka elunxwemeni phakathi kwehlathi. Ngaphezulu kwemithi engama-300 kunye namatyholo amancinci angama-3000 atyalwe kwipropathi yonke ukunika le ndawo yokuhlala ikhethekileyo.
I-Nacpan Glamping ime ngokuthe ngqo ecaleni kwe-'Sunmai', yenye yeebhari eziphezulu kunye neendawo zokutyela e-El Nido, ibonelela ngokutya okusemgangathweni kwamazwe ngamazwe kunye nesiselo kuzo zonke iindwendwe ezibonelela ngesidlo sakusasa, sasemini kunye nesangokuhlwa. Zingenise kwiiresiphi zethu zasekhaya ezimnandi kunye neecocktails ezimnandi ngelixa uphumle kolunye lolona lwandle luhle emhlabeni.
*** Plz jonga olunye uluhlu lwethu, uhlobo lweVilla Beach Front, kwelona linamava kuphela ***
4.70 · Izimvo eziyi-33
Ekunene kumbindi weNacpan Beach
I-Nacpan Beach Glamping, enye & Kuphela
Iintente zimi kwiimitha ezi-5 ukusuka elunxwemeni phakathi kwehlathi. Ngaphezulu kwemithi engama-300 kunye namatyholo amancinci angama-3000 atyalwe kwipropathi yonke ukunika le ndawo yokuhlala ikhethekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nacpan